Yangon – ရန်ကုန်ပြည်သူတို့၏ လျှပ်စစ်မီးအရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီ | MoeMaKa Burmese News & Media
Yangon – ရန်ကုန်ပြည်သူတို့၏ လျှပ်စစ်မီးအရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီ
ဖယောင်းတိုင်မီးများဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်ကို ထွန်းညှိနေစဉ်
ရန်ကုန်ပြည်သူတို့၏ လျှပ်စစ်မီးအရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီ
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ မေ ၂၃၊ ၂၀၁၂
ယမန်နေ့ညနေက ရန်ကုန်မြို့တော် ဆူးလေးဘုရားတွင် ပြည်သူတို့စုဝေးကြပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာ ရရှိရေး ဖယောင်းတိုင်များ ထွန်းညှိပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြသည်ကို တွေ့ရစဉ် …။
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လူစုလူဝေးများကို ဖယ်ရှားရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
One Response to Yangon – ရန်ကုန်ပြည်သူတို့၏ လျှပ်စစ်မီးအရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီ
TD on May 23, 2012 at 8:52 pm
This protest is good But pls be careful for using the candles along the way at night. Pls be careful for fire caused by those candles if someone throw or left at dangerous area or near explosive items. It is really important.